Messi oo ka carooday laacib ka tirsan Barcelona oo hambalyo u diray Ronaldo – Gool FM
Messi oo ka carooday laacib ka tirsan Barcelona oo hambalyo u diray Ronaldo
Liibaan Fantastic April 14, 2017
(Barcelona) 14 Abriil 2017 Wararka ka imaanaya Spain ayaa sheegaya in Lionel Messi uu caro xoogan ka muujiyay laacib ka tirsan Barcelona oo hambalyo u diray Ronaldo.
Laacibka Real Madrid ayaa habeen hore dhaliyay goolkiisii 100-aad ee tartamada yurub, wuxuuna noqday laacibkii ugu horeeyay ee gaara tiradaas.
Diario Gol ayaa daaha ka qaaday in Andre Gomes uu fariin hambalyo ah u diray saaxiibkiis ay isku xulka yihiin ee Ronaldo kadib rikoorkii uu ka sameeyay yurub maalin kadib guul daradii ka soo gaartay Juventus.
Waxaana la ogaaday in Messi uu ka xumaaday falka uu ku kacay laacibka reer Portugal kaas oo horayba uusan ugu qanacsanayn Messi inuu ka sii mid ahaado kooxda sida lagu sheegay warbixinta.
Tababare Luis Enrique ayaa ah shaqsiga kaliya ee taageerada u haaya Andre Gomes, waxaana la filayaa in Barceona ay iska iibin doonto dhamaadka xiliciyaareed kan maadama uu baxayo tababaraha reer Spain.
Andre Gomes ayaa ku jira liiska ciyaartoyda uusan ku qanacsanayn Lionel Messi inay u sii ciyaaraan kooxda, waxaana jirtay in taageerayaasha kooxdu ay intabadan ku oriyaan kulamada uu ciyaarayo.
Jurgen Klopp oo ka hadlay weerarkii loo gaystay kooxdiisii hore ee Borussia Dortmund